Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Nickel voaravaka vilany
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 8 mpanjifa naoty
(8 mpanjifa famerenana)
Ny famolavolana rindrina vita amin'ny rindrina any an-dakozia dia manary toerana be dia be ho an'ny asa fiasana, dobolobika roa sosona amin'ity gropy ity ary miloko 360 degre dia manome fahafaham-po hanomezana fahafaham-po ny tady fivoahana raha fatana na kitapom-batana ary avy eo manasa ny rindrina.
2311200 torolàlana fametrahana
Faucet ao an-dakozia 2311200 aforeto: fantsom-pahefana famenoana vilany, firafitra varahina ambony ho an'ny vatana milentika, fantsom-baravarana an-dakozia mampiasa fitaovana tsara dia tsara, Mety toy ny lovia fisakafoanana, faritra fisakafoanana, lakozia, dobo roa sosona: ambonin-tsiro (nikela borosy), kalitao miavaka, tsotra hosasana , varahina misy fahadiovana avo lenta ary voanjo varahina avo lenta, mahery, tsy misy firaka, mahatohitra harafesina. Vatana ara-batana: vy vy, maharitra, fiarovana ara-pahasalamana & tontolo iainana.
Ny famenoana ny haronao, saika ny filana fandrahoan-tsakafo dia tsy mora kokoa noho ny fampiatoana mametaka.
Ny fananganana rindrina manokana amin'ny rindrina dia ahafahana manome toerana fanampiny ao amin'ny kaontinao mandritra izany fotoana izany manome tombony miavaka.
Tendrombohitra fofona potaka potaka: mahafinaritra ny endrika famoronana ankehitriny.
Sobom-baravarankely an-dakozia miaraka amin'ny LARGE WATER FLOW RATE: Ny sakamalaho iray tokana namboarina miaraka amin'ny neoperl dia manome tsindry maharitra ary mivantana ny rano mikoriana.
Faucet ao an-dakozia: INSTALLATION MORA sy 3 WARRANTY 1: Ny haben'ny kiran'ity faucet ity dia ho 2/1 ″ NPS ary azo ampitaina 2/1 ″ NPS ao anaty 2/XNUMX ″ mpampifandray NPT, ampiasao rano mangatsiaka fotsiny. Tsotra apetraka amin'ny alàlan'ny wrench hexagon. Azafady mifandraisa aminay raha tokony misy fangatahana.
SKU: 2311200 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Mpanefy vilany, Inôksa, Wall Mounted
15.4 X 9.4 X 2.2 santimetatra
R M *** Aogositra 27, 2020
Mora ampiasaina. Napetraka tao amin'ny fivarotako dite izany, ary manoro hevitra ny hafa aho mba hividy
B *** R Septambra 7, 2019
Nividy an'ity ho an'ny rafozam-baviko izay manamboatra ny lakozianany indray aho. Tiany ny fijery sy ny fomban'io. Fix solid solid. Tsara Kalitao sy Volavola, soloina tsara
C *** NSeptambra 16, 2020
Sombina tsara tarehy hamita ny lakozia vaovao,
Taorian'ny fanandramana mahatsiravina tamin'ny vokatra hafa tafaporitsaka dia nanapa-kevitra ny hanandrana ity fantsona mpameno vilany ity izahay. Adidy mavesatra izany ary miasa tsara hatreto, tsy mitete, mora apetraka. Izy io dia mifanentana amin'ny fitaovan'ny lakozia rehetra, tia ny endrika vita amin'ny nikela borosy, ny kalitaon'ny nipple varahina dia tsara, tena faly izahay nividy an'ity vokatra ity.
M *** nySeptambra 16, 2020
Nandany andro vitsivitsy aho nitady faucet nameno vilany nikela miaraka amina andalana maoderina izay ao anatin'ny teti-bolako. Hitako tamin'ny wowow ity mpameno vilany ity ary tsy ho faly kokoa. Ity faucet ity dia kalitao tena tsara, tsio-drivotra apetraka, miasa tsara, ary toa mahafinaritra ao an-dakozianay. Tsy handoa intsony ny vidin'ny marika be izao. Mamporisika mafy!
Manamora ny fandrahoana sakafo ao anaty vilaniko Lehibe izany ka tsy mila mamindra azy ireo avy ao anaty laboara mankany amin'ny fatana be fanampiana
T *** YSeptambra 17, 2020
Tongava amin'ny zava-drehetra araka ny sary
Vokatra tsara ho an'ny vola! Miasa araka ny tokony ho izy!
N *** D19 septambra 2020 US
Tena tsara bika. Sanda tsara, Toa madio sy lafo tokoa. Nahangona vola be nandahatra an'io fa tsy nividy azy tamin'ny iray amin'ireo fivarotana boaty efa ho 3 heny. Mora be ny mametraka azy ary toa tsara!
S *** YSeptambra 20, 2020
Faucet tsara tarehy ity ary mora apetraka
D *** NSeptambra 21, 2020